Amin'ny voany - Church of the World of God Switzerland
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Amin'ny voany
Nilaza koa anefa izy fa afaka mamantatra ny olona amin’ny voany ianao. Tsy ny tiany holazaina akory hoe, amin'ny toe-javatra mitombo tsara, dia afaka manana paoma mihantona eo amin'ny vatantsika isika. Afaka mamokatra voa ara-panahy anefa isika, araka ny Jaona 15,16 Miaritra.
Inona no tiany holazaina amin’ny hoe karazana voankazo inona no hijanona? Ao amin’ny Lioka 6 dia naka fotoana niaraka tamin’ny mpianany i Jesoa mba hiresahana amin’izy ireo momba ny valisoa ho an’ny karazana fitondrantena sasany (jereo koa ny Matio 5). Avy eo ao amin’ny andininy faha-43 dia milaza izy fa ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, toy ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ao amin’ny andininy faha-45 dia milaza fa mihatra amin’ny olona koa izany: “Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin’ny rakitra ratsin’ny fony. izany no lazain’ny vava.
Romana 7,4 dia milaza amintsika ny fomba ahafahana manao asa tsara: “Toy izany koa ianareo, ry rahalahiko, dia novonoina ho an’ny lalàna [teo amin’ny hazo fijaliana miaraka amin’i Kristy] [tsy manan-kery aminareo] mba ho an’ny hafa, dia ny Izay natsangana tamin’ny maty mba hahavokarantsika [asa tsara] ho an’Andriamanitra.”
Tsy azoko an-tsaina hoe manana trano fisakafoana any an-danitra feno voankazo maina na am-bifotsy Andriamanitra. Na ahoana na ahoana anefa dia misy vokany maharitra eo amin’ny hafa sy amintsika ny asa soa ataontsika, ny teny feno hatsaram-panahy ataontsika, ary ny “kaopy feno rano ho an’ny mangetaheta.” Hitondra any amin’ny fiainana ho avy izay hahatsiarovan’Andriamanitra azy ireo isika rehetra. lazao aminy (Hebreo 4,13).